ရတနာဝါသဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺: ဘာနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်မလဲ
လူ့လောက လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားနေကြစကားလေး “ တန်ဖိုးရှိအောင်နေ ” ၊ “တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ အလုပ်တွေ မလုပ်ကြနဲ့” တဲ့ တန်ဖိုးဆိုတာ ဘာလဲလို့ တွေးကြည့်မိလိုက်သည်။
တန်ဖိုး... အထူးသဖြစ် လူတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးကို ဘာနှင့် တိုင်းတာကြပါမလဲ။ ငွေကြေးနှင့် တိုင်းတာမှာလား ၊ ပညာဖြစ် တိုင်းတာမှာလား ။ ပါတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကိုကြည့်၍ တန်ဖိုး နိမ့်သည်၊ မြင့်သည် တိုင်းတာကြမှာလား..။
ယင်းသို့ဆိုလျှင် ငွေကြေးချမ်းသာကြသောသူတိုင်းက တန်ဖိုးရှိကြပေတော့မည် ။ ပညာတတ် သူတိုင်းက တန်ဖိုးရှိကြတော့မည်။ ပါတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းကြီးသူတိုင်းက တန်ဖိုးရှိသည့် လူသားများအဖြစ်ရပ်တန့်သွားကြပေလိမ့်မယ်။
တချို့သောသူတွေဟာ ပညာသာရှိတာ ၊ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေက တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ စကားတွေ ၊ ငွေကြေားချမ်းသာသူကလည်း ငွေကြေးချမ်းသာပြီး အပြုအမူတွေက တန်ဖိုးမဲ့တယ်။ သူက အသိုင်းအဝိုင်းသူ့ပါတ်ဝန်းကျင်ကသာ ကြီးတာ ဘာမှ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး...စသည့် စကားလုံးများကို စာရှု့သူများမလွဲမသွေကြားဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါဆိုလျှင် ဥစ္စာ ငွေကြေး ၊ ပညာကြွယ်ကာ ပါတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း ကြီးမားပြည့်စုံသူတိုင်း တန်ဖိုးရှိသူတွေ မဟုတ်နိုင်တာ သေချာလောက်ပြီဟုထင်ပါတယ်၊လူတစ်ယောက်အတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး အဓိကအချက်သည် မည်သည့်အရာလဲဟု မေးကြည့်လိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး မြတ်ဘုရားစံပါမြို့ကိုကြွတော့ သောဏဒဏ္ဍပုဏ္ဏားကိုမေးခဲ့တာလေး
သွားသတိရမိတယ်။ တခါတုံးကသောဏဒဏ္ဍတ ပုဏ္ဏားကြီးနှင့်တကွ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား လာရောက် ရှစ်ခိုးပူဇော်ကြသော မြှိုသူမြို့သားများအား တရားရေအေးတိုက်ကျွေးရန် မြတ်စွာဘုရားမှ ယနေ့ရောက်လာကြကုန်သော တရားနာပရိသတ်တို့အား မည်သည့်တရား ဟောမည်ကို တွေးဆပြီးပရိသတ်များကိုမေးပြီးဟောမယ်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊
ပထမဦးစွာ ရှေ့ဆုံးမှ နေရာယူကာ ဦးတင်နေသော ပုဏ္ဏားကြီးအား စ၍ မေးခွန်း မေးလိုက်လေသည်၊ အသင် ပုဏ္ဏားကြီး ပုဏ္ဏားကြီးတို့၏ ဗြဟ္မာဏမျိုးရိုး ဘာကြောင့် အမျိုးမြင့်မြတ်ရပါသလဲ?
ပုဏ္ဏားကြီးက မြတ်စွာဘုရား၏ မေးခွန်းကို အမေးခံရလျှင် လွန်စွာမှ ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြှောက်မိ လေသည်။ မိမိတို့၏ ကြီးမြင့်လှသည့် မျိုးရိုးကို မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်က စိတ်ဝင်စားသည်ပါလားဟု တွေးမိကာ ဝမ်းသာအားရ လျှင်မြန်စွာ လျှောက်ထားလေးသည်။
“အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့မျိုးရိုး မြင့်မြတ်နေခြင်းဟာ အခြားသောအကြောင်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘုရား။ တပည့်တော်တို့မှာ စောင့်ထိန်းရမည့်အချက် (၅) ချက်ရှိနေပါတယ်ဘုရား။
ဒကာတော်ပုဏ္ဏားကြီး ထိုအချက်(၅) ချက်မှာ ဘာတွေလဲ ဟု မေးမြန်းလေရာ ထိုပုဏ္ဏားမှ အားရဝမ်းသာစွာဖြစ် မိမိတို့မျိုးရိုးဂုဏ်ကို ဖော်ကျူးပြလေသည်။
၅။ အမှား/အမှန် ခွဲခြားနိုင်သော ပညာရှိရပါမည်။ဟု လျှောက်လေသည်။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှ ပုဏ္ဏားကြီးဘယ်လိုမှမမျှော်လင့်သော မေးခွန်း တစ်ခု ထွက်လာခဲ့သည်။
“ဒကာကြီး အကယ်၍များ တစ်ယောက်ယောက်က ဒကာတော်ပုဏ္ဏားကြီးအား ထိုအချက် (၅) ချက် ထဲမှ တစ်ချက်ချက်ကို လျှော့ချပေးပါဆိုလျှင် မည်သည့် အချက်ကို သင်လျှော့ချပေးပါမည်လဲ?။
အရှင်ဘုရား အကယ်၍များ တစ်ယောက်ယောက်က ထိုအချက် (၅) ချက်ထဲမှ တစ်ချက်ချက် လျှော့ချပါဆိုလျှင် တပည့်တော် သည် ရုပ်ရည်ချောမောတင့်တယ် လှပရပါမည် ဆိုသော အချက်ကို လျှော့ပါမည်ဘုရား။
ဘာကြောင့်လဲဆိုလျှင် ရုပ်ဆိုး ၊ ရုပ်ချောသည်ဆိုသည်မှ ဘဝအဆက်ဆက်မှ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည့် ကုသိုလ် ၊အကုသိုလ် အကျိုးဆက်ကြောင့်သာဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိဘဝအတွက် တပည့်တော်တို့ မတတ်နိုင်ပါ။
တပည့်တော်တို့၏ အမျိုးရိုးဂုဏ်ကို ထိပ်တင်ချင်၍သာ ရုပ်ရည်ချောမောလှပရမည် ဆိုသော အချက်ကို ထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့် စောင့်ထိန်းရမည့် အချက်(၅)ချက်တွင် တစ်ချက် လျှော့ရမည်ဆိုပါက “ရုပ်ရည်ချောမောလှပရမည် ” ဆိုသော အချက်ကို လျှော့ချပါမည်ဘုရား။
“ပုဏ္ဏားကြီး “ရုပ်ရည်ချောမောလှပရမည်”ကို လျှော့ပြီးလျှင် နောက်ထပ်တစ်ချက် ထပ်လျှော့ချ ပေးပါဟု ဆိုပါက အသင်ပုဏ္ဏားမည်သည့်အရာကို လျှော့မလဲ?
“အရှင်ဘုရား အချက် (၂)ချက်လျှော့ရမည်ဆိုလျှင် တပည့်တော်သည် “ ဗေဒင် ၊ ကျမ်းဂန်၊ မန္တာန်များ အလွတ်ရရမည်” ဆိုသည့် အချက်ကို လျှော့ချပါမည်ဘုရား။
တပည့်တော်တို့ မျိုးရိုးတွင် ကျမ်းဂန်၊မန္တာန်များကို ရှေးလာစဉ်ဆက် အလွတ်ရသည်ရှိသကဲ့သို မရှိသည့်အခါလည်း ရှိခဲ့ဖူးပေလိမ့်မည်။ ကျမ်းဂန်စာပေများသည် စာအုပ်စာပေများနှင့် အစဉ် ထိမ်းသိမ်းလာကာ လိုအပ်ပါ ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်၍ မျိုးရိုးမြင့်မြတ်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်(၅) ချက်တွင် (၂)ချက်လျှော့ရမည်ဆိုပါက တပည့်တော်သည် ထိုအချက်ကို လျှော့ချပါမည်ဘုရား”
ပုဏ္ဏားကြီး၏ ထိုသို့အဖြေပြီးဆုံးလျှင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှ ပုဏ္ဏားကြီး အကယ်၍များ (၃)ချက်လျှော့ချပေးပါ ဆိုပါလျှင်လည်း မည်သည့်အချက်ကို သင်လျှော့ချပေးမလဲ?
အချက် (၃)ချက် လျှော့ရမည်ဆိုသော အချိန်တွင် ပုဏ္ဏားကြီးမှာ ပြန်ဖြေရန် အနည်းငယ် ခက်ခဲလာလေပြီး။ ရှေးဦးစွာ မေးခဲ့သော မေးခွန်း (၂)ခုကဲ့သို့ လွယ်လင့်စွာ ဖြေဆိုနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပဲ သေချာတွေးဆကာ စဉ်းစားရပေလေသည်။
အချိန်အတော်ကြာ စဉ်းစားလေပြီးသော်အခါဝယ် ပုဏ္ဏားထံမှ
“အရှင်ဘုရား ..မလျှော့မဖြစ် လျှော့ရမည် ဆိုပါက တပည့်တော်သည် “ ဆွေခုနှစ်ဆက်၊ မျိုးခုနှစ်ဆက် မျိုးသန့်ရမည်” ဆိုသော အချက်ကို လျှော့ရပါမည်ဘုရား”
ပုဏ္ဏားကြီး၏ ထိုသို့သော အဖြေပြီးဆုံးလျှင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှ မည်သည့်အသံမျှ မထွက်ပေါ် သေးမှီ ပုဏ္ဏားကြီး၏ အမျိုးအနွယ်ဝင် မြို့သူမြို့သားများထံမှ
“အသင်ပုဏ္ဏားကြီး...အဘယ်ကြောင့်ထိုအချက်ကို လျှော့ရမည်နည်း။ အကျွန်ုပ်တို့ မျိုးရိုးကို အထိခိုက်မခံနိုင်ပါ။ မျိုးရိုးဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မျိုးရိုးသန့်ချင်၍ ထိုအချက်ကို ထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပုဏ္ဏားကြီးအနေနှင့် လျှော့ချင်လျှော့ ကျန်သော အချက်နှစ်ချက်ထဲမှ ကြိုက်ရာကို လျှော့ပါ။ ဆွေခုနှစ်ဆက် မျိုးခုနှစ်ဆက်မျိုးရိုးသန့်ရမည်ဆိုသော အချက်ကို မလျှော့နိုင်ပါဟု ဆိုသည့် အသံများ ထွက်ပေါ်လာလေသည်။
ထိုသို့ ဆူညံ့လာသည့်အခါဝယ် ပုဏ္ဏားကြီးမှ မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံ ခွင့်တောင်း၍ မတ်တပ်ရပ်ကာ သူ၏ မြို့သူမြို့သားများအား စကားစလေသည်။
အဆွေတို့ ကျွန်ုပ်ဆိုသော စကားကို နားထောင်ကြည့်ပါ။ကျွန်ုပ်၏ ဆိုစကား ဆုံးလေသော်မှ အဆွေတို့ရဲ့မကျေနပ်ချက်များကို ပြောကြားကြပါ။ ငါသည် အဘယ်ကြောင့် ဆွေခုနှစ်ဆက် မျိုးခုနှစ်ဆက် မျိုးရိုးသန့်ရမည်ဟူသောအချက်ကို လျှော့ချရသည် ဆိုလျှင် ပထမဦးစွာ ကျွန်ုပ်ချန်ထားသည့် အချက်နှစ်ချက်မှာ
“မှားမှန်ခွဲခြားနိုင်ခြင်းဆိုသည့် ပညာ”ထို နှစ်ချက်ကိုသာ ချန်ထားခဲ့ပါသည်။
ဘာကြောင့် ထိုနှစ်ချက်ကို ချန်ထားခဲ့ရတာဆိုလျှင် ထိုနှစ်ချက်သည် လူဖြစ်လာသည့် ဘဝဝယ် မရှိမဖြစ် တန်ဖိုးရှိသည့် လူတန်ဖိုးဖြစ်သောကြောင့်ပင်တည်း။
လူတယောက်အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်သည့် ပညာမည်မျှ ရှိသနည်း။စသည့် နှစ်ချက်ဖြစ်သာ တိုင်းတာရပါမည်။
ဒါကြောင့် ထိုနှစ်ချက်ကို ကျွန်ုပ် မလျှော့နိုင်ပါ။ ထိုနှစ်ချက်သည် လူဖြစ်ရသည့်ဘဝဝယ် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့် လူ့တန်ဖိုးသာ ဖြစ်ပေတယ်၊ဟု ဆိုကာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံ ဦးတိုက်ကာ လျှောက်ထားလိုက်လေသည်။
အရှင်ဘုရား တပည့်တော် ဆုံးဖြတ်ချက် မှားသလား ၊ မှန်သလား ဖြေကြားပေးတော်မူပါ ။ အကယ်၍များ မှားယွင်းခဲ့သည် ရှိပါက အမှန်ကို ညွှန်၍ သွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူပါ။
“အသင်ပုဏ္ဏားကြီး၏ ဆုံးဖတ်ချက်သည် ငါဘုရား၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ထပ်တူညီပါပေသည်။
ထို လူတန်ဖိုး ဆိုသည့် တရားကို ဟောမည်ဟုဆုံးဖြတ်ကာ ထိုသို့သော မေးခွန်းများကို မေးလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပုဏ္ဏားကြီးဖြေဆိုသကဲ့သို့ပင် လူတစ်ယောက်၏ တန်ဖိုးကို ကိုယ်ကျင့် သီလနှင့် အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်သည့် ပညာဖြစ်သာ တိုင်းတာနိုင်ပါသည်။
ထို ကိုယ်ကျင့်သီလနှင့် အမှားအမှန်ခွဲခြားနိုင်သည့် ပညာသည် လူတန်းဖိုးသာမက လောက၏ ကျက်သရေမင်္ဂလာပင်ဖြစ်တယ်။ ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ထို နှစ်ချက်ကိုသာ စောင့်ထိန်းပါ။ကျက်သရေ မင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။
လူ့သဘော လူ့သဘာဝအရ လူတစ်ယောက်ကိုအမြင်နှင့်ဆုံးဖြတ်တတ်ကြသည်။ ငွေကြေး ချမ်းသာမှု ၊ကျော်ကြားမှု ၊ထူးချွန်ကျော်ဇော်မှု နာမည်ကြီးမှု ပညာတတ်မှု ရာထူးကြီးမှုတို့သည် လူ့တစ်ယောက်၏ စစ်မှန်သော တန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သင်လက်ခံမှာပါ။
ဒီနေ့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးသားရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ တစ်ခါတစ်ရံ လူ့သဘော လူ့မနောတွင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိသည့် အတုတွေများခြင်းကြောင့် အစစ်တွေပျောက်ကွယ်မှာကို စိုးသည်ကတကြောင်း တန်ဖိုးရှိသူတွေတန်ဖိုးအတုအယောင်တွေနောက်ကို ယောင်ရမ်းလိုက်မိမှာ စိုးတာကတကြောင်း မိမိ၏ နဂိုမူလရှိရင်းစွဲ တန်ဖိုးများကို ချခင်းနင်းမိမှာစိုးသည်ကတကြောင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
လူတွေဟာကိုယ်တန်ဖိုးအစစ်အမှန်ကိုသတိမပြုမိကြာဘဲ ကိုယ်ကျင့်သီလနဲ့ အမှားအမှန် ပျောက်ဆုံးကာ စာရိတ္တများပါပါသွားတတ်ပါတယ်ဒါတွေကို သတိထားမိစေဖို့ စာရှု့သူတို့ များစွာ လိုအပ်ပါတယ်။
Posted by YATANAVASA at 8:04 PM
စက္ခုပါလမထေရ်၏ ဝတ္ထု The Story of Thera Cakkhupala 瞎...
ရန်လိုသော ရဟန်းနှင့် လိမ္မာသော ဒကာ
ငရဲ တံခါး ပိတ်ပါစို့
အဆိုးမြင်ခြင်း အကောင်းမြင်ခြင်း နှင့် အမှန်မြင်ခြင...
ကုသိုလ်၊ ပညာ၊ ဥစ္စာ တစ်ခုခုရပါစေ
ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုဒဏ် အခံရဆုံး ၁၀ နိုင်ငံ